Muuqaalka Galmada Kufsiga Tango-tii Ugu Dambeysay Ee Ka Dhacday Paris Waxay Ahayd Mid Dhab Ah [NAXDIN] - Maria Schneider
Muuqaalka Galmada Kufsiga Tango Ugu Dambeysa Filimkii Paris Run Ayuu Ahaa
Bernardo Bertolucci, agaasimaha filimka caanka ah Last Tango In Paris, ayaa sheegay in goobta galmada meesha Marlon Brando wuxuu kufsaday Maria Schneider dabada wuxuu ahaa heshiiska dhabta ah!
Bertolucci wuxuu sheegay in shirqool ay la galeen Marlon Brando ay la yimaadeen goob kufsi ah, laakiin ay sameeyeen iyagoon la tashan, waqtigaas Maria oo 19 jir ahayd. Bertolucci wuxuu sheegay inuu taas u sameeyay oo kaliya inuu doonayo inay u 'falceliso sidii gabar oo kale, oo aysan u noqon sidii atariisho oo kale'!
Fiidiyowga dhowaan lagu daabacay dadweynaha kaas oo Bertolucci uu ku leeyahay:
“Isku xigxiga subagga ayaa ah fikrad aan la yeeshay Marlon subaxnimadii ka hor inta aan la toogan, waxaan doonayay falcelinteeda gabar ahaan, maahan inaan atariisho noqdo Waxaan u maleynayaa in Maria Schneider ay i necbeysay aniga iyo waliba Marlon maxaa yeelay uma aanan sheegin inay jirto faahfaahintaas subagga loo isticmaalay saliidaha ”.
Ka dib markii la duubay filimkii 'Tango-kii Ugu Dambeeyay Ee Paris' Maria Schneider waxay dagaal dheer la gashay balwadda iyo diiqadda, iyadoo hal wareysi lagu yidhi:
“Waxaan dareemay bahdilaad, waxaan dareemay sidii kufsi ay u geysteen labada wiil, Marlon iyo Bertolucci. Muuqaalka ka dib, Marlon ima uusan tacsiyeynin ama raali gelin kama bixin. Nasiib wanaag, waxaa jiray hal qaadasho oo kadib filimkaas, waligay dharkayga kama aanan saarin filim kale. ”
Waa tan muuqaalkaas muranka dhaliyay:
Ka dib markii Bertolucci uu sheegay waxa uu yidhi qaar ka mid ah jilayaasha caanka ah ayaa carada ka muujiyay baraha bulshada. Aktarada Jessica Chastain ayaa qortay:
“Dhamaan dadka jecel filimkan- waxaad daawaneysaa 19 jir da’ ah oo uu kufsaday oday 48yr ah. Agaasimaha ayaa qorsheeyey weerarkeeda. Waxaan dareemayaa xanuun. ”
“War. Weligey dib uma eegi doono filimkan, Bertolucci ama Brando si la mid ah markale. Tani waa wax laga yaqyaqsoodo. Waxaan dareemayaa xanaaq ”
Selena Gomez si buuxda qaawan
Angela sarafyan qaawan xiisaha
ugaarsade rachel sawiro qaawan